Weeraryahanka cusub ee Man United Ighalo oo la ogaaday waxa uu sameyn doono haddii uu Caawa Gool ka dhaliyo Chelsea… + SAWIRRO – Gool FM
(London) 17 Feb 2020. Weeraryahanka dhawaan galka ah ee Manchester United Odion Ighalo ayaa lagu wadaa inuu caawa ka soo muuqdo kulanka adag ay kooxdiisa ku wajaheyso Chelsea ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League.
Saxaafadda England ayaana sii ogaatay waxa uu sameyn doono Ighalo haddii uu caawa gool uga shubo Blues.
Waxaa la sheegay inuu goolka u hibeyn doono walaashii Mary oo dhawaan ku geeriyootay dalka Canada.
Waxaa kaloo xusid mudan inuu soo xiran doono kabo ay ku xardhan yihiin magaca walaashii iyo waliba funaanad hoos gashi ah.
Mary oo taageeri jirtay Manchester United, isla markaana waligeed jeclayd inay mar uun aragto walaalkeed oo u ciyaaraya Red Devils ayaa geeriyootay bishii December ee la soo dhaafay iyadoo 43-jir ah.
Ighalo oo ka waramay geerida dhawaan ku timid walaashii ayaa yiri:
“Mararka qaar marka aan kaligeey ahay waxaan soo xusuustaa iyada markaasaa waran la iiga taagaa wadnaha.
“Walaashey Mataanka ila ah ee Akhere way i soo wacdaa iyadoo ooyneysa oo leh waan u xiisay abaayo, anigana sidoo kale waan ooyaa mararka qaar oo aan kaligey ahay.
“Waa khaasaro xanuun badan waxaana isku dayayaa ka rag ahaan inaan is adkeeyo.”.
Dhaliyaha reer Nigeria ayay u badan tahay inuu caawa kulankiisii ugu horreeyay ka soo muuqdo kooxda uu amaahda ugu yimid ee Manchester United, balse su’aasha ayaa ah ma dhalin doonaa goolkiisii ugu horreeyay ee Red Devils xilli ay wajahayaan Chelsea oo mininkeeda joogta?.